Gaa na USA: Kpọmkwem ntinye ọhụrụ chọrọ maka United States
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Gaa na USA: Kpọmkwem ntinye ọhụrụ chọrọ maka United States
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Gaa na USA: Kpọmkwem ntinye ọhụrụ chọrọ maka United States .
Ma ụmụ amaala US na ụmụ amaala mba ọzọ bụ ndị gbachara ọgwụ mgbochi ọrịa kwesịrị iji ihe akaebe nke ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ha mee njem iji nye ụgbọ elu ha tupu ha apụọ United States.
Gọọmentị Biden kwupụtara amụma njem ụgbọ elu mba ụwa ọhụrụ nke siri ike, na-agbanwe agbanwe n'ụwa niile, yana ahụike ọha na-eduzi.
Malite na Nọvemba 8, ndị njem ụgbọ elu mba ofesi na United States ga-achọ ka a gbaa ọgwụ mgbochi zuru oke yana ịnye ihe akaebe nke ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi tupu ha abanye ụgbọ elu iji fega United States,
A ga-aga n'ihu na-achọrọ ndị njem ikuku ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke ka ha gosi akwụkwọ nyocha nje virus na-adịghị mma tupu ọpụpụ site na nlele e weere n'ime ụbọchị atọ nke njem ha ga-aga United States tupu ha abanye.
Dị ka nke November 8 na United States na-agbanwe ihe achọrọ maka ntụrụndụ na ndị njem azụmahịa ịbanye US.
United States Ngalaba Ochie ewepụtara ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ na nnwale maka ntuziaka njem mba ụwa taa.
Malite na Nọvemba 8, ndị njem ụgbọ elu nke mba ọzọ na-aga United States a ga-achọrọ ka ịgbanye ọgwụ mgbochi zuru oke yana ịnye ihe akaebe nke ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa tupu ịbanye n'ụgbọelu iji fega United States, na-enwe oke oke.
The CDC ekpebiela na maka ebumnuche nke ịbanye na United States, ọgwụ mgbochi anabatara ga-agụnye ndị FDA kwadoro ma ọ bụ ikike, yana ọgwụ mgbochi nwere ndepụta ihe mberede (EUL) sitere na Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO). Hụ cdc.gov maka nkọwa ndị ọzọ.
A ga-aga n'ihu na-achọrọ ndị njem ikuku ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke ka ha gosi akwụkwọ nyocha nje virus na-adịghị mma tupu ọpụpụ site na nlele e weere n'ime ụbọchị atọ nke njem ha ga-aga United States tupu ha abanye. Nke ahụ gụnyere ndị njem niile - ụmụ amaala US, ndị bi na-adịgide adịgide (LPRs), na ndị mba ofesi.
Iji mee ka nchebe dịkwuo ike, ndị njem na-enweghị ọgwụ mgbochi - ma ụmụ amaala US, LPRs, ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị mba ọzọ na-enweghị ọgwụ mgbochi - ga-achọ ugbu a igosi akwụkwọ nyocha nje na-adịghị mma site na nlele e weere n'ime otu ụbọchị njem na United States.
Ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa kwesịrị ịbụ akwụkwọ ma ọ bụ ndekọ dijitalụ nke ụlọ ọrụ gọọmentị wepụtara ma kwesịkwa ịgụnye aha onye njem na ụbọchị ọmụmụ, yana ngwaahịa ọgwụ mgbochi na ụbọchị nchịkwa maka ọgwụ niile onye njem natara.
Maka ụmụ amaala mba ọzọ, a ga-achọ ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa - na oke oke - tupu ha apụọ na United States.
Ọ bụ ezie na achọghị ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa maka ụmụ amaala US na ndị LPR, ụmụ amaala US na ndị LPR zuru oke (na ndị dabere ha) ga-aga n'ihu na-enwe ike igosipụta akwụkwọ nyocha nje na-adịghị mma site na nlele ewepụtara ruo ụbọchị atọ tupu ọpụpụ na United States. . Ha ga-ewetarịrị ihe akaebe ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa iji ruo eru maka windo ule ụbọchị atọ. Ụmụ amaala US na ndị LPR ndị na-enweghị ike igosi na a gbajuru ha ọgwụ mgbochi ọrịa ga-egosipụta akwụkwọ nyocha nje na-adịghị mma e mere ihe na-erughị otu ụbọchị tupu ọpụpụ.
Na mgbakwunye na ịchọpụta ihe akaebe nke nsonaazụ ule na-adịghị mma tupu ọpụpụ - nke ha mere kemgbe Jenụwarị 2021 - ndị ụgbọ elu ga-enyocha ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi.
Ndị njem ga-achọ igosi ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ha, site na ndekọ akwụkwọ, foto ndekọ akwụkwọ ha, ma ọ bụ ngwa dijitalụ.
Ndị ụgbọ elu ga-achọ:
Dakọtara aha na ụbọchị ọmụmụ iji gosi na onye njem bụ otu onye ahụ gosipụtara na akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa;
Kpebie na ọ bụ ụlọ ọrụ gọọmentị nyere ndekọ ahụ (dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọrụ ahụike ọha, ụlọ ọrụ gọọmentị) na mba ebe enyere ọgwụ mgbochi;
Nyochaa ozi dị mkpa maka ikpebi ma onye njem ahụ ezute nkọwa CDC maka ịgba ọgwụ mgbochi zuru oke dị ka ngwaahịa ọgwụ mgbochi, ọnụọgụ ọgwụ mgbochi enwetara, ụbọchị nchịkwa, saịtị (dịka ọmụmaatụ, ụlọ ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, ebe nlekọta ahụike) ịgba ọgwụ mgbochi.
A napụrụ ụmụaka ndị na-erubeghị afọ 18 na ọgwụ mgbochi chọrọ maka ndị njem mba ofesi, nyere ma erughị eru nke ụfọdụ ụmụaka na-eto eto maka ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, yana mgbanwe zuru ụwa ọnụ na ịnweta ọgwụ mgbochi maka ụmụaka ndị tozuru oke ịgba ọgwụ mgbochi.
Ndị njem ga-egosipụta akwụkwọ nke nsonaazụ nyocha COVID-19 na-adịghị mma ma ọ bụ akwụkwọ mgbake sitere na COVID-19 n'ime ụbọchị 90 gara aga tupu ịbanye n'ụgbọelu na United States (ma ọ bụ tupu ịbanye ụgbọ elu mbụ n'usoro njikọ nke etinyere n'otu ihe ahụ). njem njem na United States).
Ma nnwale nucleic acid amplification (NAATs), dị ka ule PCR, na ule antigen tozuru oke.
Enwere ike iji nnwale onwe onye ma ọ bụrụ na ọ dabara ihe achọrọ n'usoro gụnyere nhazi oge site na ọrụ telehealth jikọtara ya na ndị nrụpụta nnwale ahụ na nke na-ewepụta nsonaazụ nnwale nke ụgbọ elu nwere ike nyochaa tupu ịbanye.
Nke a bụ otu ụkpụrụ maka ule ntozu nke etinyegoro na nyocha nke ọpụpụ tupu Jenụwarị.
A ga-emerịrị ule a karịa ụbọchị kalenda atọ tupu ụbọchị ụgbọ elu mba ụwa ga-aga United States.
Yabụ, ọ bụrụ na onye njem na-apụ United States n'elekere 10 nke abalị na Jenụwarị 19, ha ga-eweta nsonaazụ na-adịghị mma maka ule emere n'oge ọ bụla ka elekere 12:01 nke ụtụtụ gasịrị na Jenụwarị 16.
Na mbụ, a chọrọ ndị njem niile ka ha gosipụta nsonaazụ ule na-adịghị mma n'ime ụbọchị atọ nke njem na United States.
Maka ụmụ amaala US na ndị LPR ndị nwere ike igosi na ha gbagoro ọgwụ mgbochi zuru oke, ihe a chọrọ ka bụ otu - ha ga-egosipụta akwụkwọ nyocha na-adịghị mma sitere na nlele emere n'ime ụbọchị atọ nke njem.
Nke ahụ pụtara na ụmụ amaala US na ndị LPR niile gbara ọgwụ mgbochi na-aga United States kwesịrị ịdị njikere iweta akwụkwọ ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa yana nsonaazụ ule ọjọọ ha.
Ụmụ amaala US na ndị LPR ndị na-enweghị ike igosi ihe akaebe nke ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa zuru oke ga-egosizi akwụkwọ nyocha na-adịghị mma site na nlele e weere n'ime otu ụbọchị ọpụpụ.
Ụzọ kachasị mfe ị ga-esi zere imezu ihe siri ike a chọrọ bụ ka ndị njem nweta ọgwụ mgbochi.
Anyị kwenyere na a ga-enyelarị ọtụtụ ndị njem mba ofesi ọgwụ mgbochi zuru oke yana ndị na-amabeghị ma tozuru oke kwesịrị ịgba ọgwụ mgbochi tupu ha aga njem.
A na-enweta ule n'ofe ahịa na United States, yabụ ụmụ amaala US na-eme njem na mba ofesi nwere ike bute ngwa ule proctored ha na ọpụpụ na US nke ha nwere ike iburu tupu ha alọta. Anyị nwekwara obi ike na a ga-enwekwa ihe oriri zuru oke n'ụwa niile.
Agbanyeghị, enwerekwa usoro ịwepụ n'ọnọdụ site na ihe nyocha tupu ọpụpụ achọrọ mgbe nnwale dabara adaba adịghị.